Rastafari Rootzfest, Mankalaza Ny Fanalalahan’i Jamaika Ny Rongony Mariroanà · Global Voices teny Malagasy
Rastafari Rootzfest, Mankalaza Ny Fanalalahan'i Jamaika Ny Rongony Mariroanà
Voadika ny 08 Desambra 2015 3:13 GMT
Rastafari, tamin'ny fety fitokanana ny Rootzfest, Negril, Jamaika. Sary avy tamin'i Fern Nesson, nahazoana alàlana.
Ny Rastafari Rootzfest, natomboka ny 27 Oktobra 2015 tao amin'ny Mozea Bob Marley any Kingston, Jamaika, nanambatra ny mozika reggae sy ganja taminà hetsika iray manova zavatra lehibe tao amin'ny nosy Karaiba izay nanokatra ny làlana ho any amin'ny tsy fanaovana ny fidorohana sy fikirakiràna rongony mariroanà ho heloka. Nolazaina ho “fetibe iraisampirenena ho an'ny fahasambarana, izay mankalaza ireo olona teratany ao Jamaika sy ireo kolontsaina lovainy.”
Ny Rootzfest, izay natao ny 12-15 Novambra tao Negril, no hetsika voalohany hahazoam-bola tsy tratran'ny haba araka ny lalàna vaovao izay nihatra ny voalohandohan'ity taona ity, manaiky ny fombafomba ireo zo ara-pinoanan'ny Rastafari ao amin'ny firenena. Ahitana ny fampiasàna ara-pinoana ny mariroanà ny fivavahana nentin-drazana Rastafarian. Mark Golding, minisitry ny fitsaràna ao Jamaika, no nanao voalohany ilay lalàna.
Barbara Blake-Hannah; sarin'i Fern Nesson, nahazoana alàlana.
Ny hanao fetibe miaro fampianarana isan-taona no hevitra ao ambadiky ny Rootzfest, izay “mankalaza ny fotopisainana, fahalalahana ary kolontsaina Rastafari ary milaza ny tantaran'ny adin'ny Rastafari hanaovana ny ganja ho ara-dalàna sady mankalaza ny tsy anenjehan'ny lalàna ny ganja any Jamaika,” hoy i Barbara Blake-Hannah, manam-pahaizana manokana amin'ny kolontsaina Jamaikana, fialamboly, horonantsary, literatiora sy fiarahamonina, miaraka amin'ny fahalinana manokana amin'ny Rastafari. Ny High Times Cannabis Cup no iray amin'ireo zavatra misongadina indrindra, fifaninanana mba hisafidianana ny karazana mariroanà tsara indrindra.
Tena zava-dehibe tokoa ny fahafahana mampiantrano ny hetsika toy izao ao Jamaika, raha jerena hoe vao volana vitsivitsy monja lasa izay, mety maha voasambotra sy hidirana am-ponja ny fananana bozaka voarara na dia kely monja aza. Nilàna hetsi-bahoaka lehibe tokoa ny fahampahafantarana sy ny fanomezana alalana ny fetibe toy izao mba tsy ho tafiditra amin'ny lalànan'i Jamaika mikasika ny rongony mampidi-doza.
Iray tamin'ireo mpitarika io hetsika io i Ras Iyah V, mpamorona ny Fikambanan'ireo Mpamboly Rongony sy Ganja ao Westmoreland (WHGFA) . Nanondrotra ny fambolena mariroanà ny fikambanany, mba ho lasa karazana fidiram-bola iray mampiakatra toekarena, izay mety hanampy an'i Jamaika amin'ny trosany iraisam-pirenena ankehitriny. Mieritreritra i Ras Iyah V fa raha tokony ho lasa mpilalao fototra amin'ny indostria i Jamaika, satria mandrara ny fambolena mariroanà ireo lalàna maneran-tany, tokony harovana ny tombotsoan'ireo mpamboly izay nialoha làlana tany amin'ny faneken'ny lalàna:
Charles Nesson sy Ras Iyah V tao amin'ny Rastafari Rootsfest. Sarin'i Fern Nesson, nahazoana alàlana.
Charles Nesson, ilay mpampianatra lalàna William F. Weld ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna ao Harvard sady mpanorina ny Ivontoerana Berkman ho an'ny Fiarahamonina sy ny Aterineto ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard, nilaza hoe tena mahagaga tokoa hoe afaka “mivoaka mba hifanantona amin'ny hafa ary mahatsapa fa tohanan'ireo mpamboly madinika eny rehetra eny ihany nony farany” ireo mpamboly madinika avy ao Westmoreland:
Manana drafitra fiarahamiasa mahagaga ao Jamaika izahay, ho an'ny tetezamitan'ny fambolena ganja tsy ara-dalàna mankany amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ara-dalàna.
Manana mpitarika mahagaga izahay ao amin'i Ras Iyah V.
Manana minisitry ny governemanta mahagaga miasahana izany ihany koa izahay.
Toa ao tsara daholo ireo fepetra rehetra ho an'i Jamaika, mba hahafahana mitsambikina mandroso ao anatin'io indostria ara-dalàna vaovao mampientanentana io. ilay fetibe Rastafari Rootzfest, fampisehoana sy fifaninanana, dia noeritreretina hisarika mpizahatany farahafakeliny miisa 1.500, miaraka amin'ireo lehibe avy ao Jamaika mitovy isa amin'izay ihany koa.
Mety ny tena zava-dehibe, nisy fividianana ofisialy teo an-toerana, marika iray amin'ny finiavan'i Jamaika ho mpilalao matotra amin'ilay tsena iraisampirenena vao mipongatry ny rongony, raha ny voalazan'i Barbara Blake-Hannah hoe “mitazona ny maha-kolontsaina iray tsy mivaky sy ny fototra ara-drariny izay ananan'ny Rastafari sy Jamaika ho atolony ny tany tontolo”. Nampiseho tranoheva an'ireo mpamokatra eo an-toerana sy ireo orinasa mitondra ny marika ganja mitoetra any Etazonia ilay hetsika, ary hatramin'ny an'ireo masoivohom-panjakana sahala amin'ny minisiteran'ny indostria, siansa ary ny fizahantany.
Fialamboly Reggae tamin'ny Rootzfest. Sary avy tamin'i Fern Nesson, nahazoana alàlana.
Nisy hira tsara tao amin'ilay hetsika lehibe manan-tantara noho ireo kaonseritry ny reggae nahitàna ireo mpanakanto ao Jamaika sy ny fidiran’ ireo antanan-tohatra ganja rehetra tamin'ilay Cannabis Cup. Nanome karazana lohahevitra maro ihany koa ny fandaharana, toy ny indostrian'ny mariroanà — ny tsy fanenjehan'ny lalàna ho toy ny heloka, ny fisarihana famatsiam-bola sy fampiasam-bola amin'ny rongony, ny fikarohana sy fanomezana lisansa, ary fanomezan-danja ny fizakàmanana ara-tsaina ho an'ny rongony vaovao mihitsy. Nahitàna ny kolontsaina Rastafari sy ny tantaran'ny mariroanà ny ankamaroan'ireo fandaharana natolotra isanandro; nahitàna fanaovana yoga eny amoron-dranomasina sy fandefasana sarimihetsika, miaraka amin'ny fivelesana amponga sy fandefasana reggae amin'ny alina.
Nambara ny Alahady 15 Novambra, andro farany tamin'ny Rootzfest, ireo nandresy tamin'ny “High Times Cannabis Cup”.
Tao amin'ny Facebook, nambaran‘i Barbara Blake-Hannah ny rivotra “fifaliana” tamin'ilay hetsika. Aminy, ny hoe “afaka novidian'ny olona rehetra […] ireo tahony sy ireo tsirinà ganja”, izay no tena zava-dehibe. Nampiany ny zavatra niainany manokana tao amin'ilay lahatsoratra, hoy izy:
Tonga ireo lehibe fony aho niala ny Kianja, nampieritreritra ireo mpiady GanJAH rehetra nitolona tamin'ny ady mba ho tonga amin'izao andro izao ny RASTA hoe afaka ampiasaina MALALAKA ny bozaka maintso! mahatsiaro ireo mpiady izay efa lasa razana ankehitriny, izay miaraka amintsika eto Negril ny fanahiny androany. Misaotra an'i JAH noho ny FITAHIANY. Andao ampiasaina amim-pahamendrehana io fa tsy lanilaniana fotsiny.